It is me. Ko Niknayman.: ဒါမျိုး ခွင့်ပြုသင့်သလား၊ ခွင့်လွှတ်သင့်သလား။
ဦီးပညာစက္ကနှင့် ဦးပညာနန္ဒ အရိုက်ခံရမှု ပုံဖေါ်ချက်။ (ပခုက္ကူမြို့ )။
Posted by Ko Niknayman at 3:36 PM